mBOT: Arduino robhoti kudzidza kudzidza | Linux Vakapindwa muropa
mBOT: robhoti kudzidza kudzidza
mBOT idiki yakavhurwa sosi android yakagadzirwa nekambani yeMakeblock. Chokwadi iyo kambani inonzwika kujairika kwauri nekuda kwechangobva kuitwa mushandirapamwe wekupa mari mDrawBot robhoti, chimwe chezvigadzirwa zvacho. Asi ikozvino yatanga mumwe mushandirapamwe wekusimudzira mBOT, robhoti diki rakanangana nekuve chishandiso chine simba kumakirasi uye kudzidzisa vana kuronga.
Kibo ndiye imwe diki Android yakauya pamberi gore rakapera, asi rinobatwa neMBOT kunyangwe ivo vari vaviri vakagadzirirwa chinangwa chimwe chete. Kuti ive inokwezva, inovimba nembiru mbiri dzekutanga, imwe ndiyo puratifomu yayo yekuronga inonzi mBlock uye izvo zvinoenderana neinozivikanwa Scratch 2.0. Imwe mbiru yainosimudzira ndiyo ndiro Arduino yakagadziridzwa kuti ishandiswe nyore nevadzidzi nevadzidzisi.
Zvese pasi pehunyanzvi hwemahara software yekugadzira zvinonakidza uye zvinonakidza kurovedza muviri uko vadzidzi vanogona kudzidza kuronga uye kuve nekufarira dzidziso iyi kubva vachiri vadiki. Iyo yekusimudzira nharaunda yakagadzira tutorials uye online chikuva kubatsira vadzidzisi kugadzira zvinonakidza zviitwa zvinoshandisa izere kugona kwebhoti.
Akatosangana nechinangwa chake mukuwandisa kwevanhu, achisvika zviuru makumi maviri zvemadhora paKickstarter. Zvino, chigadzirwa chaMakeblock chichaenda pamusika we mutengo ungangoita $ 49. Mutengo wakasarudzika kuitira kuti budiriro yayo isvike kumabhajeti ese uye kune vese vateereri, kunyangwe avo vasina ruzivo nekuda kwerurimi rwayo rwakajeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » mBOT: robhoti kudzidza kudzidza
Ndiri kuda xD imwe
Linux Mint Debian Edition 2 inowanikwa neCinnamon uye MATE desktops
Kuongorora kweinofungidzirwa yakavhurika-sosi Windows